IPL : दिल्लीको पहिलो खेल आज, सन्दिप खेल्ने सम्भावना कति ? – WicketNepal
IPL : दिल्लीको पहिलो खेल आज, सन्दिप खेल्ने सम्भावना कति ?
WicketNepal Staff, २०७७ आश्विन ४, आईतवार ०७:५९
आईपीएल टि-२० अन्तर्गत दोश्रो खेलमा नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने सम्मिलित टिम श्रेयस ऐयर कप्तानीको दिल्ली क्यापिटल्सले केएल राहुल कप्तानीको किंग्स-११ पन्जाब बिरुद्ध पहिलो खेल खेल्दैछ। पहिलो खेलमा शनिवार राति डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बईलाई चेन्नाईले ५ विकेटले पराजित गर्यो।
युएईको दुबई स्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय राति ७:४५ बजे सुरु हुनेछ।
लिगको उपाधि हालसम्म जित्न नसकेको दिल्ली र पन्जाब यो सिजन पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित सुरुवाती खेल जित्दै लय प्राप्त गर्न चाहन्छ। गत सिजन दिल्ली दोश्रो क्वालीफायरमा चेन्नाईसंग पराजित भएको थियो। पन्जाब भने लिग चरणमा छैठौं स्थानमा रहेपछि प्लेअफ पुग्न असफल रहेको थियो।
लिग अन्तर्गत गत सिजन दिल्लीले पन्जाबलाई १ खेलमा पराजित गरेको थियो भने १ खेलमा पराजित भएको थियो। अन्तिम-५ खेलमा दिल्लीलाई पन्जाबले ४ खेलमा पराजित गरेको छ।
कस्तो छ दिल्ली टिम
रिकी पोन्टिङ प्रशिक्षक रहेको दिल्ली टिमलाई यो सिजन विश्लेषकहरुले बलियो टिम मानेका छन् र लिग जित्ने दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। श्रेयस ऐयर कप्तानीको टिममा ब्याटिंगमा ऐयर स्वयम् सहित उदयमान युवा ब्याट्सम्यानहरु पृथ्वी शा र रिशभ पंत तथा अनुभवी शिखर धवनको उपस्थिति छ। शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिश, एलेक्स केरी जस्ता विदेशी ब्याट्सम्यानहरुले ब्याटिंग लाइन अपमा बिकल्पहरु प्रशस्त देखिन्छ। दिल्लीको स्पिन पक्ष सबै भन्दा बलियो छ। भारतीय अफ स्पिनर रभीचन्द्रन आश्विन सहित, लेग स्पिनर अमित मिश्रा र सन्दिप लामिछाने तथा देब्रे हाते स्पिनर अक्षर पटेल सबै स्तरीय स्पिनर हुन्। फास्ट बलिंगमा पनि बिकल्प प्रशस्त छ। इशान्त शर्मा, कागीसो रबाडा, किमो पौल, एनरिक् नोर्किया, ड्यानीयल स्याम्स, मोहित शर्मा, हर्षल पटेल जस्ता बलरहरुले टिम भरिपूर्ण छ।
टिम दिल्ली क्यापिटल्स (Delhi Capitals ) श्रेयस अयर ( कप्तान ), पृथ्वी शा, रिषभ पंत, शिखर धवन, अक्षर पटेल, कीमो पल(✈️), अमित मिश्रा, आवेश खान, हर्शल पटेल, इशांत शर्मा, कागिसो रबाडा(✈️), सन्दिप लामिछाने(✈️), आर. अश्विन, अजिंक्य रहाने, एलेक्स केरी(✈️), शिमरन हेटमायर(✈️), एनरिक नोर्किया(✈️), ड्यानीयल स्याम्स(✈️) , मार्कस स्टोइनिस(✈️), मोहित शर्मा, ललित यादव र तुषार देशपांडे।
कस्तो छ पन्जाब टिम
अर्कोतर्फ उदयमान कप्तान केएल राहुलको टिम पन्जाब टिम पनि कम छैन। राहुल सहित ब्याटिंगमा क्रिस गेल, ग्लेन म्याक्सवेल, निकोलस पुरन, मायाँक अग्रवाल, सरफराज खान जस्ता आक्रामक ब्याट्सम्यानहरु टिममा छन्। बलिंगतर्फ भारतीय फास्ट बलर मोहम्मद शामी, शेल्डन कटरेल, क्रिस जोर्डन छन् भने मिस्ट्रि स्पिनर मुजिब उर् रहमानले स्पिन पक्षको नेतृत्व गर्नेछन्। यस्तै रभी बिश्नोइ, मुरुगन आश्विन, क्रिश्नप्पा गोथम, हरप्रित ब्रर जस्ता स्पिनरहरु टिममा छन्। मुख्य प्रशिक्षक अनिल कुम्बलेको उपस्थिति टिमको अर्को बलियो पक्ष हो। अझ जोन्टि रोड्स, एन्डी फ्लावर, वासिम जाफर जस्ता प्रशिक्षकहरु पनि टिमसंग बिभिन्न जिम्मेवारीमा आबद्ध छन्।
टिम किंग्स-११ पंजाब (Kings XI Punjab) केएल राहुल ( कप्तान ), करुण नायर, मंदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन(✈️), सरफराज खान, क्रिस गेल(✈️), दर्शन नालकंडे, हरप्रीत बरार, कृष्णप्पा गौतम, अर्शदीप सिंह, हरदूस विलज्योन(✈️), जे सुचिथ, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, मुरगन अश्विन, ग्लेन म्याक्सवेल(✈️), शेल्डन कटरेल(✈️), क्रिस जोर्डन(✈️), रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह, दीपक हुडा, जेम्स नीशम(✈️), तजिंदर ढिल्लोन र ईशान पोरेल।
सन्दिप खेल्छन् कि खेल्दैनन् ?
नेपाली स्पिनर सन्दिप लगातार तेश्रो सिजन दिल्ली क्यापीटल्सको लागि खेल्ने क्रममा रहेका छन्। उनलाई २०१८ मा २० लाख भारतीय रुपैयाँमा अक्सनमार्फत टिममा लिएको थियो।गत साता सिपिएल टि-२० मा जमैका तलावाजको प्रतिनिधित्व गरेर सन्दिप युएई प्रस्थान गरेका थिए।
मंगलबार युएई पुगेका सन्दिपको सबै ३ वटा कोरोना टेस्ट नेगेटिभ आएको छ जसपछि उनि शनिवार टिमसंग अभ्यासमा पुगेका थिए। उनि आज खेल्नको लागि उपलब्ध रहेका छन्। सन्दिपका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले विकेटनेपालसंग कुरा गर्दै उक्त कुरा पुस्टि गरेका छन्।
“सन्दिपको सबै ३ वटा कोरोना टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यसपछि उनको क्वारेन्टाइन अबधि शनिवार सकिएको हो। उनले शनिवार टिमसंग अभ्यास पनि गरिसकेका छन्। उनको पुगेको दिन मंगलबार राति टेस्ट गरिएको थियो जसपछि हरेक वैकल्पिक दिन टेस्ट भएको थियो।” यस अघि ६ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने बताईएको भएता पनि त्यो भन्दा ३ वटा टेस्टको रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहेको शिवाकोटीले जानकारी गराए।
दिल्लीले शनिवार राति फेसबुकमा पोस्ट गरेको अभ्यासको भिडियोमा सन्दिपले नेटमा बलिंग गरेको देखिएका थिए।
लिग सुरु हुनु अघि यो पटक नेपाली स्पिनरले अन्तिम-११ मा मौका पाउने सम्भावना प्रवल रहेको चर्चा भैरहेको छ। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुनिल गावस्कर, अजित अगरकर, आकाश चोपडा, दिप दाशगुप्ताले नेपाली स्पिनरलाई दिल्लीको अन्तिम-११ मा समाबेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सन्दिपले शनिवार टिमसंग अभ्यास गरेका थिए ( फाइल तस्विर )
सन्दिपले अन्तिम-११ मा मौका पाउन सक्ने कारणहरु
श्रेयस ऐयर कप्तानीको दिल्ली टिममा यो पटक विदेशी खेलाडीहरु सन्दिपसंगै, शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, किमो पौल, एलेक्स केरी, कागीसो रबाडा, ड्यानियल स्याम्स, एनरिक नोर्किया गरि ८ जना रहेका छन्। अन्तिम-११ मा मात्र ४ जना विदेशी खेलाडीहरु मात्र समाबेश गर्न पाउने नियम रहेको छ।
दिल्लीमा स्टार भारतीय स्पिनर रभीचन्द्रन आश्विन,अमित मिश्रा, अक्षर पटेलको उपस्थिति रहेको छ। युएईको पिच सुस्त र स्पिनरहरुलाई मद्दत गर्ने हुँदा यो पटक सन्दिपले धेरै खेलमा मौका पाउने सम्भावना रहेको छ। सिपिएल टि-२० मा राम्रो लयमा रहेको तथा भर्खरै प्रतियोगिता खेलेर आएकोले पनि सन्दिपले मौका पाउने सम्भावना प्रवल छ।
स्पिन मद्दत गर्ने पिचमा आश्विन अन्तिम-११ मा स्थायी रहनेछन्। लेग स्पिनरको रुपमा टिममा अमित मिश्रा र सन्दिप लामिछाने मात्रै रहेका छन्। गत सिजन दिल्लीले सन्दिप र मिश्रा दुवैलाई अन्तिम-११ मा मौका दिएको थियो। यो पटक पिचले पनि साथ दिने हुँदा अन्तिम-११ मा दिल्लीले आश्विन पछि थप २ जना स्पिनर लिएर खेल्ने सम्भावना प्रवल छ। यो अवस्थामा मिश्रा, सन्दिप र बायाँ हाते स्पिनर अक्षर पटेल मध्ये २ जनाले अन्तिम-११ मा मौका पाउने सम्भावना रहेको छ।
३८ वर्षीय मिश्राको फिटनेस तथा खेल अभ्यासको कमिका कारण सन्दिपको सम्भावना यो पटक बढी रहन्छ। मिश्राले घरेलु क्रिकेटमा पनि गत वर्ष सयद मुस्ताक अलि ट्रफीमा विकेट निकाल्न संघर्ष गरेका थिए। उनले हरियाणाको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा १२ खेलमा मात्र ६ विकेट लिन सकेका थिए। यस्तै मिश्राको फिटनेस पनि उनलाई बाहिर राख्ने कारण हुनसक्छ।
विदेशी खेलाडीको रुपमा अन्तिम-११ मा अल-राउण्डर स्टोइनिस तथा फास्ट बलरद्वय रबाडाले मौका पाउने सम्भावना छ। गत सिजन बिग ब्यासमा सर्वाधिक विकेट लिएका राम्रा डेथ ओभर बलर ड्यानियल स्याम्स पनि अन्तिम-११ को दाबेदार हुन्। सन्दिपले मौका पाउन विदेशी तिब्र गति बलरले कम मौका पाउनु पर्छ र युएईको पिचको सुस्त स्वभावका कारण त्यसको सम्भावना पनि छ। युएईमा स्पिनरहरु हावी हुँदै आएका छन्।
सिपिएल टि-२० मा राम्रो लय, युएईको स्पिन मद्दत गर्ने पिच तथा अमित मिश्राको पछिल्लो फर्म र फिटनेसको कारण सन्दिपले यो पटक अन्तिम-११ मा बढी मौका पाउन सक्नेछन्।
चर्चित वेबसाइट EspnCricinfo ले खेल अघि तयार गरेको सम्भावित ११ खेलाडीको सूचीमा अमित मिश्रालाई समाबेश गरेको छैन। स्पिनरको रुपमा आश्विन, सन्दिप र अक्षर पटेललाई राखिएको छ।
युएईमा सुहाउँदो सन्दिपको स्पिन
युएईमा सन्दिपले यस अघिनै खेलेको अनुभव पनि रहेको छ त्यसले पनि उनलाई फाइदा पुग्नेछ। नेपालले २०१९ को जनवरी/फेब्रुअरीमा युएईसंग ३ वटा टि-२० र ३ वटै वानडेको सिरिज खेलेको थियो। उक्त सिरिजमा सन्दिपले कुल १२ विकेट लिएका थिए। टि-२० मा उनले ३ खेलमा ५ विकेट लिएका थिए भने वानडेमा ७ विकेट लिएका थिए। उक्त प्रदर्शनले सन्दिपको स्पिन युएईको पिचमा सुहाउने देखाउछ।
लयमा छन् सन्दिप
गत साता सम्पन्न सिपिएल टि-२० मा जमैकाको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा १० खेलमा १२ विकेट लिएका सन्दिपले निरन्तर राम्रो बलिंग गरेका थिए। १ खेल बाहेक सन्दिपले बलिंग गरेको सबै खेलमा विकेट लिएका थिए भने प्रतियोगितामा मात्र ५.१० प्रतिओभर रन खर्चिएका थिए। यस क्रममा सन्दिपले गायना बिरुद्धको खेलमा ४ ओभरमा ८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए जुन सन्दिपको विदेशी लिग करियरकै किफायती बलिंग स्पेल हो। सन्दिपको यो लय पक्कै पनि दिल्ली प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङले नियालेका छन्।
सन्दिपलाई भारतीय टिममा छनौट गर्ने गावस्करको चाहना
IPL : मुम्बई बिरुद्ध जितपछि धोनीले बनाए ठूलो कीर्तिमान